सगरमाथामा अधिवक्ता भुसालको पाइला - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
वरिष्ठ अधिवक्ता ६२ वर्षीय विष्णु भुसालले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । उनी आज (सोमबार) विहान ७ः३० बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन् ।
भुसालको आरोहणको व्यवस्थापन गरेको हिमालयन सेपर्डका अनुसार सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने उनी पहिलो अधिवक्ता बनेका छन् । विश्व समुदायसँग कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अनुरोध गर्दै उनले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको लोगो अङ्कित झण्डासहित भुसाल वैशाख २ गते सगरमाथा आरोहणका लागि प्रस्थान गरेका थिए । अमेरिकाबाट वातावरणीय तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कानूनमा स्नातकोत्तर उनले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा कानुनविद्को रुपमा काम गर्दै आएका छन् । भुसालले यसअघि १३ कात्तिकमा दोलखा रोल्वालिङ उपत्यकाअन्तर्गत पर्ने रामदुङ हिमाल (५,९२५ मि.) चुमेका थिए।
अर्घाखाँची स्थायी घर भएका भुसाल हाल श्रीमती राधा, छोरी डा. प्रीति र छोरा रोशनसहित राजधानीको बाँसबारीमा बस्दै आएका छन् । भुसालकी छोरी डा. प्रीतिले पनि चार दिनअघि मात्र सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छन् । उनको छोरा रोशन हाल पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।
रामदुङले देखेको वकिल